Farmaajo oo saxiixay Xeerka Matalaadda Muqdisho ee Aqalka Sare | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo saxiixay Xeerka Matalaadda Muqdisho ee Aqalka Sare
Muqdisho ayaan wali helin maqaam, waxay ku hoos jirtaa Villa Somalia go'aan ka gaarta cida gudoomiyaha ka noqonaysaa gobolka Banaadir.
MQUDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo ayaa Maanta saxiixay Xeerka Aqalka Hoose ee Baarlamaanka uu ansxiiyay 27-kii June 2020, ee ku saabsan Matalaadda Muqdisho ee Aqalka Sare.
Madaxweynaha ayaa qoraal uu soo saarey Maanta ku shaaciyay inuu qalinka ku duugay xeerkan oo u ogolaanaya in Gobolka Banaadir ku yeesho Barlamaanka 11-aad, gaara haan Aqalka Sare 13 kursi.
Saxiixa Farmaajo ayaa yimid kadib cabashooyinka shacabka Gobolka ka muujiyeen matalaad la’aanta Aqalka Sare ee Barlamaanka 10aad oo ah xuquuq aasaasi ah oo uu dastuurka KMG siiyay si lamid ah gobollada kale ee dalka.
Waxuu Farmaajo saxiixa ku raadinayaa taageero shacabka Muqdisho, maadaama uu yahay Musharax markale u tartamaya xilka Madaxweynaha dalka, isagoo ku tashanaya Kuraasta gobollada uu saameynta ku leeyahay dhismaha Maamullada ka jira.
Dooda waxay ka dhalan doontaa sida Beelaha degan Muqdisho loogu qeybin doono Kuraasta 13-ka ah ee Gobolka Banaadir loo qoondeeyay.
Sidoo kale, dhanka sharciyadda marka laga eego, Aqalka Sare ma ansixin qaraarkan. Gollaha Shacabka oo kaliya ayuu soo maray, iyadoo sida dastuurka uu dhigayo xeer kasta wuxuu sharci ku noqdaa marka labada aqalka ee Baarlamaanka soo meel-mariyaan.